5 Noocyada Websaydhka Muhiimka u ah Websaydhka Waa inaad Falanqaysaa | Martech Zone
5 Noocyada Websaydhka Weyn ee Muhiimka ah ee Ay Tahay Inaad Falanqeyso
Isniin, April 13, 2015 Talaado, Juun 16, 2015 Jenn Lisak Golding
Soo bixitaanka xogta weyn waxay keeneen wada hadalo badan oo kaladuwan oo ku saabsan Analytics, raadinta iyo suuq geynta cabirka. Ka suuqley ahaan ahaan, waxaan xaqiiqdii ognahay muhiimadda ay leedahay raadinta dadaalkeenna, laakiin waxaan ku qanci karnaa waxa aan u maleyneyno inaan raadineyno iyo waxa aan ahayn; waa maxay, dhamaadka maalinta, waa inaan ku bixino waqtigeena?
In kasta oo ay jiraan macno ahaan boqollaal mitir ah oo aan eegi karno, waxaan taa badalkeeda kugu dhiirigelin lahaa inaad diirada saarto shan qaybood oo muhiim u ah websaydhka isla markaana aad ku ogaatid cabirka qaybahaas muhiimka u ah ganacsigaaga:
WHO ayaa booqatay boggaaga.
MAXAY u yimaadeen goobtaada.
SIDEE ay ku heleen.
XAGEE ay ka baxeen.
In kasta oo shantan qaybood ay fududeynayaan waxa aan isku dayeyno inaan cabirno markii qof yimaado meheraddeenna, runti waa wax aad u dhib badan marka aan isku dayeyno inaan ogaanno cabbiraadaha muhiimka ah iyo kuwa aan ahayn. Ma dhahayo waa inaadan fiiro gaar ah uyeelan jaangooyooyin kaladuwan, laakiin sida waxkasta oo kale ee suuqgeynta, waa inaan mudnaanta siinaa howlaheena maalinlaha ah iyo, dhanka kale, soo gudbintayada, si aan uqodano macluumaadka naga caawin kara abuur xeelado beddelaad.
Qiyaasta Qeyb Kasta
In kasta oo qeybaha ay yihiin kuwo is-sharraxaad leh, cabbiraadaha ay tahay in lala socdo qeyb kasta mar walba ma cadda. Aynu eegno noocyada kala duwan ee mitirrada qayb kasta:
Yaa: In kasta oo qof kastaa jeclaan lahaa inuu ogaado aqoonsiga saxda ah ee ku yimid boggooda, had iyo jeer ma heli karno macluumaadkaas. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qalab, sida raadinta cinwaanka IP, oo naga caawin kara inaan soo koobno ​​baaxadda. Faa'iidada ugu weyn ee raadinta IP-ga ayaa ah inay noo sheegi karto shirkadda booqatay goobtaada. Haddii aad la socon karto waxa IP-yada booqanaya bartaada, markaa waxaad hal talaabo u jirtaa inaad aqoonsato cidda. Caadi ah Analytics qalabka badanaa ma bixiyaan macluumaadkan.
maxaad: Sababta uu qof ugu yimaado goobta waa wax shaqsi ah, laakiin waxaa jira qiyaaso qiyaaso ah oo aan u adeegsan karno sidii aan u ogaan lahayn sababta ay u yihiin. Qaar ka mid ah kuwan waxaa ka mid ah: bogagga la booqday, inta waqtiga ee lagu qaatay bogaggaas, waddooyinka beddelashada (horumarka bogagga ay ku booqdeen goobta) iyo isha gudbinta ama nooca taraafikada. Markaad fiiriso cabirradan, waxaad sameyn kartaa xoogaa fikrado macquul ah oo ku saabsan sababta booqdaha uu u yimid goobtaada.
Sidee: Sidee booqdaha degelku kuugu helay waxaad ku noqon kartaa tilmaan SEM-gaaga ama dadaalkaaga bulsheed. Adoo fiirinaya sida kuu sheegi doonta halka dadaalkaagu socdo iyo meesha uusan kajirin, laakiin sidoo kale wuxuu kuu sheegayaa meesha fariintaadu guuleysato. Haddii qof kaa helo raadinta Google oo uu gujiyo xiriiriyahaaga, waxaad ogtahay in wax afkaaga ku qasbay inay sidaas sameeyaan. Qiyaasaha aasaasiga ah ee halkan ku yaal waa nooca taraafikada ama ilaha gudbinta.
Waa maxay: Waxa booqdayaashu eegeen malaha waa kuwa ugu toosan qaybahaan. Qiyaasta aasaasiga ah ee halkan ku taal ayaa ah bogagga la booqday, runtiina wax badan ayaad ku go'aamin kartaa macluumaadkaas.
Halkee: Ugu dambeyntiina, halka martidu ka baxday ay kuu sheegi karto halka ay xiisihii ka waayeen. Bal fiiri bogagga bixitaanka oo eeg haddii ay jiraan bogag soo socda oo soo socda. Ku hagaaji waxyaabaha ku jira bogga oo sii wad hoyga, gaar ahaan haddii ay tahay bogga soo degitaanka. Guud ahaan waxaad ka heli kartaa meesha booqdaha uu ka soo baxay macluumaadka guud Analytics qalabyada sida Google Analytics ee qaybta waddooyinka beddelashada.
Miyaad fiirineysaa mid kasta oo ka mid ah qaybahan oo aad ku hagaajineysaa waxa ku jira ama websaydhka iyadoo lagu saleynayo xogta soo noqonaysa? Haddii lagugu qiimeeyo waxqabadka boggaaga, markaa waa inaad noqotaa.
Tags: qiyaasta falanqayntamarketing inboundjaangooyooyinka